Albaabka kontoroolka fog ee PLC |
Nidaamka Kormeerka Fog ee Dhuxulaha Dhuxul
Nidaamka baarista fog iyo cilad bixinta ee shearer waxaa soo saaray Shenzhen ChiLink IOT Technology Co., Ltd. oo ku saleysan 4G, Internetka iyo mabaadi'da kale ee isgaarsiinta. Nidaamku wuxuu kormeeri karaa oo u gudbin karaa xuduudaha gudaha ee gawaarida xiiraha sida hadda, xaddiga, xawaaraha jarista, tr ...
Codsiga kormeerka fog ee PLC ee saxaafadda filter
Codsiga 4G router Shirkado aad u tiro badan ayaa rajeynaya inay adeegsadaan internetka si ay u gaaraan hawlgal iyo maareyn qiimo jaban oo hufan. Shirkad ka shaqeysa ilaalinta deegaanka ayaa ah shirkad caan ku ah soo saarista qalabka wax soo saar qalabka warbaahinta gudaha Shiinaha. Si loo wanaajiyo tartanka shirkada ...
Codsiga PLC ee injineernimada daaweynta bullaacadaha caafimaadka
Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, tikniyoolajiyadda kormeerka fog waxaa lagu arki karaa meel kasta oo ka mid ah dhinacyada kala duwan ee irridda 4G ee warshadaha. Kormeerka fog ee PLC ayaa si aad iyo aad ah loogu adeegsadaa qaybaha injineernimada kala duwan, gaar ahaan qaybta injineernimada daaweynta bullaacadaha. T ...
Soo kabashada Heat ee nidaamka nidaamka kormeerka fog
Iyada oo u doodista qaran ee ilaalinta tamarta iyo yareynta qiiqa, codsiga nidaamka soo kabashada kuleylka ayaa aad iyo aad u ballaaran. Tamarta korontada ku baxda nidaamka shaqada ee kombaresarada hawada waxaa loo beddelaa kuleyl kadibna waxaa qaadaa qalabka qaboojinta (biyaha ama hawada) t ...